Saint Alejo သို့ဆုတောင်းခြင်း ? လူတစ် ဦး၊ ချစ်သူများနှင့်ရန်သူများကိုမောင်းထုတ်ရန်
San Alejo သို့ဆုတောင်းခြင်း ငါတို့နှင့်အခြားသူတစ် ဦး အကြားအကွာအဝေးအချို့ထားရန်လိုအပ်သည့်အခါ၎င်းသည်ပြီးမြောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်သူဆုံးဖြတ်ချက်ချသောအခါသူပြန်လှည့်ပြန်ကြည့်ခြင်းမရှိဘဲထိုသို့ပြု၏။
ကျွန်ုပ်တို့အားခွန်အားနှင့်ပြည့်နှက်စေပြီးကျွန်ုပ်တို့အားကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူများ (သို့) အပျက်သဘောဆောင်သောစွမ်းအင်ကိုထုတ်လွှင့်သောသူများနှင့်ဝေးကွာသွားသည်ဟူသောခံစားချက်ကိုပေးသောဆုတောင်းခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုနည်းတူစွာပင်ရင်းနှီးသောဆွေမျိုးတစ် ဦး မှအပျက်သဘောဆောင်သောမိတ်ဖွဲ့မှုကိုဖယ်ရှားပေးရန်ဤဆုတောင်းခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
1 San Alejo ကဘယ်သူလဲ။
1.1 လူတစ် ဦး ကိုမောင်းထုတ်ရန်စိန့်အဲလက်စီယပ်စ်ထံဆုတောင်းပါ
San Alejo ကဘယ်သူလဲ။
San Alejo သည်ဘ ၀ တွင်နောက်ခံလူတစ် ဦး ဖြစ်သည် ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်း။ သူကသူတစ်ပါးကိုယုံကြည်ခြင်း၏အခြေခံမူများကိုသင်ကြားပေးရန်စိုးရိမ်သည်။ အချို့သူများကကြီးထွားလာသောဆရာ မှလွဲ၍ ဒုက္ခဆင်းရဲခံရသည်။
သူမွေးဖွားသည့်နေ့ရက်အတိအကျကိုမသိရှိရသေးပါ။ သူသည်ယနေ့ခေတ်တွင်တစ် ဦး အပါအဝင်ဖြစ်သည် ခက်ခဲသောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအခြေအနေများကိုကျွန်ုပ်တို့အားကူညီဖြေရှင်းပေးသောသူတော်စင်များ.
ခရစ်တော်၏မျက်နှာကို ထောက်၍ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနှင့်မိသားစုကိုစွန့်ခွာနိုင်ခဲ့သူတစ် ဦး သည်သူ၏မယိမ်းယိုင်သောယုံကြည်ခြင်းကသူသည်အိမ်ခေါင်မိုးသို့မဟုတ်စားစရာရိက္ခာမရှိဘဲလမ်းလျှောက်ရင်းဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ကိုတိုးချဲ့ရန်အခိုင်အမာရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်လူများအားသူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုထောက်မပေးခဲ့သည် el Mundo.
သူကသူ့ကိုယ်သူဆက်ကပ်အပ်နှံခဲ့သည် အထူးသဖြင့်ကလေးတွေအစာစားချင်စိတ်နှင့်လဲခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင့်နှုတ်ကပါဌ်တော်ကိုသူတို့အားသွန်သင်ပေးရန်။ ယုံကြည်ခြင်းအားချစ်ခြင်းနှင့်အပ်နှံခြင်း၌လိုက်နာရန်ဥပမာတစ်ခု။
လူတစ် ဦး ကိုမောင်းထုတ်ရန်စိန့်အဲလက်စီယပ်စ်ထံဆုတောင်းပါ
Oh Saint Saint Alexius ကိုကောင်းချီးပေးခဲ့တယ်
ငါ San Alejo ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
လူတစ်ယောက်ကိုမောင်းထုတ်ရန် San Alejo ဆုတောင်းချက်ကိုသင်ကြိုက်သလား
လူတယောက်ထံမှဝေးဝေးထွက်ခွာသွားခြင်းသည်အချို့ကိစ္စများတွင်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထွက်သယ်ဆောင်ရန်ရှုပ်ထွေးအရေးယူ ကျွန်ုပ်တို့မလိုချင်သောသူများနှင့်နီးကပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားလမ်းပြသောအခြေအနေများရှိသည်။
မိသားစု ၀ င်တစ် ဦး ကဲ့သို့သောမကောင်းသောမိတ်ဆွေများကိုမကြာခဏဖွဲ့သောမိသားစု ၀ င်တစ် ဦး ကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်တို့အားအကျိုးပြုရန်လုပ်လျှင်၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုပြန်လည်မဖော်ထုတ်မီ၊ San Alejo အားဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်တောင်းဆိုခြင်းသည်အကောင်းဆုံး လူတစ်ယောက်
San Alejo, သခင်ဘုရားရွေးချယ်ထားသူများကိုဝန်းရံထားသည့်မကောင်းမှုမှန်သမျှကိုဖယ်ရှားရန်သင်၌တန်ခိုးရှိသောမင်း၊ ငါလည်းဝေးစွာရှောင်ရန်လည်းသင်တို့အားငါတောင်းပန်သည် (သင်၏အဖော်၏အမည်ကိုဖော်ပြပါ)
မှ… (သူမ၏ချစ်သူ၏အမည်ကိုဖော်ပြသည်) သင့်ကိုငါခေါ်မည်၊ သင့်ကိုခေါ်ဆောင်သွားရန်သင့်အားငါဖိတ်ခေါ်သည်။ (ချစ်သူ၏အမည်ကိုဖော်ပြပါ) သူမကို (သို့မဟုတ်) မေ့မေ့လျော့လျော့ပျောက်ကွယ်သွားသောဒေသသို့ခေါ်ဆောင်သွားပါ။ ၏လမ်းကြောင်း (သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နာမည်ကိုဖော်ပြပါ) ။
ရေစီးလာသည်နှင့်အမျှ ... (သင့်တွဲဖက်၏အမည်ကိုဖော်ပြပါ) မှ ... (သင်ချစ်မြတ်နိုးသောသူ၏အမည်ကိုဖော်ပြပါ) သို့အမြဲတမ်းပြေးပါ။
ဒါကြောင့် ... (သူ၏ချစ်သူ၏အမည်ဖော်ပြပါ) ၏အသက်သို့ ... (သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏အမည်ကိုဖော်ပြ) သူလည်းသူ့ဘဝကနေချက်ချင်းရုပ်သိမ်းပေးရန်။
သူတို့အတူတကွသို့မဟုတ် the ည့်ခန်းထဲမှာ, ဒါမှမဟုတ်ထမင်းစားခန်းထဲမှာ, ဒါမှမဟုတ်စားရန်စားပွဲ၌မဖွစျနိုငျကွောငျး, သူတို့ကတစ် ဦး ချင်းစီကတခြားစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောနှင့်မရွံရှာမခံစားရဘဲ privacy ကိုမရနိုငျသော။
ငါသူတို့တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားကိုမမွငျကွောငျးကိုရှာလျှင်, သူတို့သည်ပြောလျှင် ... (သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏အမည်ကိုဖော်ပြ) ပြီးတော့ ... (သင်၏ချစ်သူ၏အမည်ဖော်ပြပါ) သူတို့နောက်တဖန်တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားကိုနားမလည်ခြင်းနှင့်ခွဲခြာနောက်ဆုံးကြောင်းကြောင်းကို, San Alejo သင်တို့ကိုငါမေးတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်လမ်းကြောင်း၏စိတ်ဓာတ်ကို… (သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏အမည်ကိုဖော်ပြပါရန်) မှ… (သင်၏ချစ်သူ၏အမည်ကိုဖော်ပြသည်) မှလမ်းကြောင်းအားလုံးကိုဖြတ်တောက်ရန်ငါတောင်းပန်သည်။
ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်လူနှစ် ဦး ကိုခွဲထုတ်ရန် St. Alejo ၏ဆုတောင်းချက်ကိုဆုတောင်းပါ။
စုံတွဲများ၏ဆက်ဆံရေးတွင်, တတိယပါတီအမြဲကျန်ရစ်ရ။ San Alejo ကကျွန်တော်တို့ကိုတတိယပါတီတွေကမပြောင်းလဲဘဲနဲ့သူတို့နဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးရှိဖို့ကူညီပေးတယ်။
အဲဒါဟုတ်မဟုတ်ကိစ္စမရှိပါဘူး ရိုးရှင်းသောခင်မင်ရင်းနှီးမှု (သို့) ရည်းစားဟောင်းများနှင့်ရင်းနှီးမှုရှိခြင်းဒီဆုတောင်းချက်ကအစွမ်းထက်ပြီးထိရောက်မှုရှိတယ်။
အမြင့်ဆုံးသောအလက်ဇန္ဒြီးယားဘုရင်ပထမစိန့် Alejo သည်ကျွန်ုပ်ကိုညအချိန်တွင်မစွန့်ပစ်ပါ။ ကျွန်ုပ်ကိုစောင့်ကြည့်။ မကောင်းသောယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ကျူးကျော်သောရန်သူများထံမှသွေဖည်ပါရန်တောင်းပန်ပါ၏။
နတ်ဆိုး၊ လူဆိုးတို့၏ဆိုးညစ်သောသူတို့လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူပါ စုန်းမတွေ နှင့်ဗေဒင်ဆရာ။ San Alejo၊ San Alejo၊ San Alejo၊ သုံးကြိမ်ခေါ်သင့်တယ်။
ရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်သူကိုအပြစ်ပေးရန်သင့်အားငါပေးသောလက်ဝါးကပ်တိုင် (၃) ခုသည်ကျွန်ုပ်ကိုမှားယွင်းစေလိုသောလူဆိုးအားပေးစေခြင်းဖြစ်သည်။
မင်းရဲ့အင်အားကြီးတဲ့ San Alejo ကိုငါတောင်းပန်ပါတယ်၊ မင်းရဲ့အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမစွန့်ပစ်နဲ့ငါ့ခြေထောက်မှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကငါ့ရဲ့တာဝန်ပဲ။ အာမင်။ ယေရှု
San Alejo de Leónတစ်ယောက်ကငါ့ကိုသစ္စာဖောက်ချင်ရင်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာယေရှုရောက်နေစဉ်ဘုရားသခင်ကသူ့တောင်ပံတွေကိုငါ့နှလုံးကနေနှိမ့်ချစွာခွင့်ပြုပါစေ။
သငျသညျရန်သူများကိုတားဆီးချင်လျှင်, ဒီစိန့် Alexius မှမှန်ကန်သောဆုတောင်းပဌနာသည်။
ရန်သူများကသူတို့ကိုအနီးကပ်ကြည့်ရှုရန်နီးစပ်ရမည်ဟုထင်မြင်သူများရှိသည်။ သို့သော်ရန်သူများမှာသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ပိုကောင်းသည်။ အကယ်၍ ရန်ငြိုးကတိုက်ရိုက်ဖြစ်ခဲ့လျှင်၎င်းသည်
ဤကိစ္စများတွင် San Alejo ထံဆုတောင်းခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီသည် သူတို့ကိုနှင်ထုတ်တော်မူပါ သဘာဝကျကျနှင့်ပြproblemsနာများမရှိဘဲ။
ကျွန်ုပ်၏အရင်းနှီးဆုံးရန်သူများမှာအဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုသူသိသည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရသည့်ခက်ခဲသောအခြေအနေများကြားမှလူများအားငြိမ်းချမ်းရေးကိုကူညီရာ၌သူသည်စိန့်တစ် ဦး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ မိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်ဝေးရာသို့ထွက်ခွာရန်မှာမလွယ်ကူပါ။ သို့သော်မကြာခဏပြုလုပ်ရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။
အရာရာကိုအောင်မြင်သူစိန့်အလက်စီယပ်စ်၊ အရာရာကိုမြင်တွေ့နိုင်သူ၊ အရာရာကိုမြင်တွေ့နိုင်သူသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ဓာတ်ကိုခွဲခြားသိမြင်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တည်ရှိမှု၌ချစ်ခြင်းမေတ္တာကင်းမဲ့ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုရန်၊ မြင့်မြတ်သောသတ္တုတွင်း၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကယ်တင်ရန်ကူညီခြင်း၊ အခြား / သို့မဟုတ်ငါ့ကိုအစားထိုး, သူတို့အကြားဓာတုဗေဒမျက်ရည်, သူတို့ကိုဆိတ်ကွယ်ရာနေစေပါ။
San Alejo, သင်၏ကွဲပြားခြားနားသောချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြုပါ၊ သူနှင့်သူမကိုစွန့်ခွာပါ၊ ကျွန်ုပ်ထံပြန်လာပါ၊ ကျွန်ုပ်မပါဘဲမအောင်မြင်ပါစေနှင့်၊ ကျွန်ုပ်၏အိပ်မက်တွင်သာယာသောလူမဟုတ်ကြောင်း၊ သင်၏ဘဝ၌ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၌ရှိသည်။ သင့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့်သင်၏စိတ်ကူးယဉ်အတွက် entity ။
ကျွန်ုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ သူစိမ်းကသူ့အသက်ကိုစွန့်ခွာရန်၊ သူနှင့်သူမနှင့်ကျွန်ုပ်ကြားရှိရပ်တည်သူ၊ သူ၏အလိုတော်၊ စန်အလီဂျိုမှဖယ်ထုတ်ပစ်ပါစေကျွန်ုပ်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ကျွန်ုပ်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။
သူ / သူမနှင့်သူမနေထိုင်ရန်မတောင်းဆိုပါ၊ သူ၏ဘဝသည်ကျွန်ုပ်ပိုင်ဆိုင်ရာမဟုတ်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်ပြန်ရပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာရောက်လာသည်၊ San Alejo၊ ကျွန်ုပ်လိုအပ်သည်၊ ကောင်းပြီ၊ သူသည်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။
ချစ်ရန်နှင့်ချစ်ရန်လိုအပ်ခြင်းသည်အမြဲတမ်းအမြင့်ဆုံးသောရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည် ဆုတောင်းခြင်း။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှာဖွေပြီးအိမ်တစ်လုံးကိုတည်ဆောက်နိုင်ခြင်းသည်သဟဇာတရှိပြီးမိသားစုတစ်ခုသည်ကလေးများကြီးပြင်းလာသည်ကိုမြင်တွေ့ရသောမိသားစုသည်လူအများနေထိုင်ရန်ထိုက်တန်သောအလွန်လှပသောဘ ၀ အတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။
San Alejo, သူမြေကြီးပေါ်မှာရှိစဉ်အခါသူသည်ဘုရားသခင်၏အကြောင်းရင်းမှမိမိကိုယ်ကိုအပြည့်အဝအရှုံးမပေးမီမိသားစုရှိခဲ့သောကြောင့်သူသည်ဤကဲ့သို့သောမေတ္တာမျိုးကိုရှင်သန်နိုင်ခဲ့သည်။
စစ်မှန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှာဖွေရန်အံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်သူ့ကိုတောင်းဆိုခြင်းသည်ယုံကြည်ခြင်းလုပ်ရပ်ဖြစ်ပြီးအမြဲတမ်းအလျင်အမြန်တုံ့ပြန်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယေရှု၏နာမကိုအမှီ ပြု၍ ဖခင်အားကျွန်ုပ်တို့တောင်းသမျှကဖခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးလိမ့်မည်။
အားသာချက်ယူပါ San Alejo အပေါငျးတို့သပဌနာ၏တန်ခိုး!